I-GV's House #2, Amaminithi ukuya echibini, ezibhedlela nasedolobheni - I-Airbnb
I-GV's House #2, Amaminithi ukuya echibini, ezibhedlela nasedolobheni
I-GV's House iyidolobha elihlotshiswe nje eli-2 elinekhishi eligcwele elinakho konke ongakudinga ukuze ulungiselele ukudla! Leli gumbi lokulala eli-2, indawo yokugezela engu-1 isenhliziyweni ye-Cheatlake. Siyabathanda izilwane ezifuywayo :) Lesi sikhala sinompheme omncane ongemuva, ilondolo eyodwa, futhi usofa ulala embhedeni omncane.
I-GV’s House iyimizuzu nje ukusuka enkundleni yezemidlalo, esibhedlela, edolobheni, nasechibini okwenza le ndawo ifaneleke kakhulu kubahambi bosuku lwegeyimu, abahlengikazi abajikelezayo, izivakashi ezisebenza ngaphandle kwedolobha (amaminithi ukusuka phakathi kwezifunda), noma izivakashi ezidinga indawo encane yokuvakasha.
*Nakuba singakuvumeli ukubhema kuleyunithi, le yunithi kungenzeka ukuthi ibibhenywa eminyakeni eminingi edlule futhi kusukela ngaleso sikhathi iye yashiswa ngokuphelele futhi yalungiswa kabusha. Futhi, sicela ukhumbule ukuthi ngezinye izikhathi le yunithi ingase ihlale isonto noma ngaphezulu ngaphandle kokugeleza komoya futhi kube khona othile kuyo**
Ngitholakala ngefoni nangombhalo